Mesa 21.2 inosvika nerutsigiro rwekutanga rweApple M1, kugadzirisa kwePanfrost, Vulkan uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memwedzi mitatu yekukura kuburitswa kweshanduro nyowani ye davi idzva re Tafura 21.2 iyo ine yekuyedza nyika uye kuti mushure mekudzikiswa kwekupedzisira kwekodhi, iyo yakagadzika vhezheni 21.2.1 ichaburitswa.
Iyi vhezheni itsva yeMesa 21.2 inopa yakazara OpenGL 4.6 rutsigiro yeiyo 965, iris, radeonsi, zink, uye llvmpipe madhiraivha, pamwe neOpenGL 4.5 tsigiro inowanikwa ye AMD r600 uye NVIDIA nvc0.
1 Zvinyorwa zvitsva zveTafura 21.2
Zvinyorwa zvitsva zveTafura 21.2
Mu Tafura 21.2 tinogona kuzviona asahi OpenGL mutyairi inosanganisirwa neyekutanga GPU rutsigiro inopihwa pamachipisi Apple M1. Mutungamiriri inoshandisa iyo Gallium interface uye inoenderana nemazhinji emabasa eOpenGL 2.1 uye OpenGL ES 2.0, asi zvakadaro hazvigone kushandiswa kumhanyisa mitambo yakawanda.
Imwe ruzivo ndeye PanVk mutyairi kuiswa (yakagadzirirwa nevashandi veCollabora) iyo inopa tsigiro yemifananidzo API Vulkan GPU ARM Mali Midgard uye Bifrost uye yakamisikidzwa sekuenderera kwePanfrost chirongwa, icho chinopa OpenGL rutsigiro.
Zvakare, mune iyi vhezheni itsva yeMesa 21.2 Panfrost yeMidgard uye Bifrost inotsigira OpenGL ES 3.1, kunyangwe zvichitaurwa kuti pane zvirongwa zvekuwedzera mashandiro paBifrost machipisi uye rutsigiro rweGPUs zvinovakirwa paValhall architecture (Mali G77 uye nyowani).
Mutyairi weZink akashanda kuitira kuti igone kutsigira OpenGL yekuwedzera: GL_ARB_sample_locations, GL_ARB_sparse_buffer, GL_ARB_shader_group_vote, GL_ARB_mavara, uye GL_filter_minlock. DRM fomati modifera akawedzerwa.
Ndichiri mu Vulkan ANV mutungamiriri (akangwara) uye OpenGL Iris mutyairi, mune iyi vhezheni itsva se yaita basa rekugadzirira kutsigira iri kuuya Intel mifananidzo makadhi Xe-HPG (DG2). Izvi zvinosanganisira kutanga ray kutsvaga kugona uye ray kutsvaga shader rutsigiro.
Padivi ravapipe mutyairi, iyo "wideLines" modhi ikozvino yatsigirwa (inopa rutsigiro rwemitsara nehupamhi hwakakura kupfuura 1.0).
Izvo zvinotaurwa zvakare kuti OpenGL 4.3 yatove nerutsigiro rwe virgl uye kuenderana ne Vulkan 1.2 inowanikwa yeIntel uye AMD makadhiZvakare uye mune emulator modhi (vn), Vulkan 1.1 rutsigiro runowanikwa rweQualcomm GPUs uye iyo lavapipe software rasterizer uye Vulkan 1.0 inowanikwa yeBroadcom VideoCore VI GPU (Raspberry Pi 4).
Iyo Nouveau nv50 mutyairi weNVIDIA GT21x (GeForce GT 2x0) GPUs inosanganisira OpenGL ES 3.1 tsigiro.
Vulkan TURNIP mutyairi uye Freedreno OpenGL mutyairi achigadzirirwa maGPU
Qualcomm Adreno inopa yekutanga rutsigiro rweAdreno a6xx gen4 GPU (a660, a635).
Iko kugona kwekuvaka mutyairi weRADV papuratifomu yeWindows uchishandisa iyo MSVC compiler yaitwa.
Yakagadziriswa rutsigiro rwekusimba kuona uye kurodha kweimwe GBM (Generic Buffer Manager) inodzosera kumashure. Iko shanduko inoitirwa kugadzirisa Wayland rutsigiro pane masisitimu ane NVIDIA madhiraivha.
Vulkan RADV (AMD), ANV (Intel) uye lavapipe madhiraivha akawedzera rutsigiro rwekuwedzera
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Mesa 21.2 inosvika nerutsigiro rwekutanga rweApple M1, kugadzirisa kwePanfrost, Vulkan uye nezvimwe